Mareykanka iyo Soomaaliya oo 100- ka mid ah Al-shabaab dilay todobaadkan – Radio Daljir
Noofember 12, 2017 7:16 b 0
Ciidmaada Mareykanka ayaa duqayn ka dhan ah Al-shabaab oo ay fuliyeen cawaysinkii hore ee Jimcihii ku dilay tobobaneeyo ka mid ah ururka Al-shabaab, kadib iskaashi dhexmaray Mareykanka iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda Soomaaliya.
Sarkaal katirsan militariga Soomaliya ayaa xaqiijiyay 13- ka mid ah dagaalamayaasha Al-shabaab in lagu dilay duqayn diyaarad nooca aan duuliyaha lasocon, duqaynta ayaa ka dhacday deegaanka Basra oo katirsan shabeelada hoose, una jirta magaalada Muqdisho dhanka waqooyi 30km.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay duqaynta oo dhacday wax ka yar 24 saacadood duqayntii hore inay ka dhacday gobolka Baay, laguna dilay tobobaneeyo katirsan Al-shabaab.
AFRICOM ayaa sheegay duqaynta oo ay fuliyeen Khamiistii inay ku timid wada shaqayn dhexmartay Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya.
Dhanka kalle dowladda faderaalka Soomaaliya ayaa sheegtay duqayn kale isla koonfurta Soomaaliya kadhacday Sabtidii lagu dilay dagaalamayaal Al-shabaab katirsan.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariisow ayaa ku sheegay bartiisa twiterka in 81- Al-shabaab katirsan, hub iyo gaadiid ay lahaayeen lagu burburiyay xero ciidan oo ay ku lahaayeen deegaanka Jilib ee koonfurta Soomaaliya, gaadiidka ayaa waxaa uu sheegay inay ahaayeen shan gaari rasaas iyo hubna lagu burburiyay, waxaana uu xusay kooxdan inay doonayeen inay u gudbaan gobolka Gedo.
Afhayeenka Al-shabaab CabdulCasiis Abuu Muscab ayaa isaguna beeniyay in weerar ka dhan ah kooxdooda uu ka dhacay magaalada Jilib, waxaana uu ku tilmaamay kuwa aan xaqiiqda ka tarjumayn wararka dowladda ee ah in laga dilay 81- dagaalame oo katirsan kooxdiisa Al-shabaab.
Saraakiisha Soomaaliya ayaa ku tilmaamay howlgalada socda inay dhabaha u xaarayaan qorshaha duulaanka ee ka dhan al Al-shabaaab ee dowladda oo madaxwaynaha uu ugu horeeyo ay horay ugu dhawaaqeen.
DF Soomaaliya ”Shaqada Garoonka Aadan Cadde Uma Hakan Sababo Amaan” (dhegayso)